Mabaadi'da Working of Dryair Products - Hangzhou DryAir Daaweynta Co., Ltd
In geeddi-soo-saarka, saamaynta dadban qoyaan ku saabsan alaabta ayaa had iyo jeer dhibaato ...
Dehumidification Air waa xal shaqayn karta iyo waxaa lagu gaari karaa by dhawr hab: Habka koowaad waa qaboojinta hawada hoose barta sayaxa oo ay ka saareen qoyaan by uumiga. Habkani waa wax ku ool ah ku hoos jira xaalad halkaas oo dhibic sayaxa waa 8 - 10 o C ama ka badan; Habka labaad waxaa lagu dhuuqin qoyaanka by qalab desiccant ah. Dunta dhoobada wakiilada hygroscopic furan cufay waxaa la galay kaalinta labaad malabkii-sida. Qaab dhismeedka dehumidification waa mid fudud, oo ay gaari karaan -60 o C ama ka yar iyada oo loo marayo isku dhafka gaarka ah ee qalabka desiccant. Habka qaboojinta waa wax ku ool ah ee codsiyada yar ama halka heerka qoyaanka waxaa dhexdhexaad ah gacanta, ee codsiyada waaweyn, ama halka heerka qoyaan waa in ay gacanta ku heer aad u hooseeya, dehumidification desiccant ayaa loo baahan yahay.
DRYAIR Systems isticmaalaan qaboojinta technology habka, iyo sidoo kale giraangiraha desiccant ee qaab-dhismeedka gacanta. Sida ku cad shaxanka, baabuurta kaxeeya wheel desiccant inuu isku shaandheyn 8 ilaa 18 jeer saacaddii, oo si joogta ah nuugaya qoyaan iyada oo tallaabo cusboonaysiinta ah, si ay u bixiyaan hawo qalalan. Wheel desiccant wuxuu u qaybsan yahay aagga qoyaan iyo aagga goortii; ka dib markii qoyaanka hawada laga saaro aagga qoyaan of wheel ah, kabuufi soo diro hawada engeganna wuxuu u beddelaa qolka. Wheel The isagoo nuugo biyaha isku bedbedeli doono meesha cusboonaysiinta, oo hawada ka dibna la cusboonaysiiyay (hawada kulul) loo soo diray in ka badan wheel ka jihada dambe, ceyrinta biyaha, si giraangirta sii wadi kartaa in ay ka shaqeeyaan.
Hawada cusboonaadeen waa kuleelka la mid kululeeyayaasha uumi ama kulayliyaha korontada. Sababo la xiriira guryaha gaarka ah ee gel silicone super iyo kelli-shaandho in wheel desiccant ah, DRYAIR dehumidifiers garasho kartaa dehumidification joogto ah hoos xaddi badan oo mugga hawada, iyo buuxiyo shuruudaha content qoyaanka aad u yar yahay. Iyada oo u dhigma oo isku dhafan, content qoyaanka hawada loola dhaqmo wuxuu noqon karaa in ka yar 1g / kg hawada qalalan (ma lamid heerkulka dhibcood dharab -60 o C). DRYAIR dehumidifiers samatabbixin qaab aad u fiican waxaa ka sii fiican muujiyey in deegaanno qoyaan yar yahay. Si ay u ilaaliyaan heerkulka mid xasiloon oo hawada qalalan, waxaa lagu talinayaa in hoos u qaboojiso ama kululeeyo ilaa hawada dehumidified by rakibidda qalabka hawada-qaboojiyaha ama kululeeyaha.
2.Principle qalabka daaweynta Vocational:
Waa maxay ururiye Vocational?
ururiye Vocational wax ku ool ah u Daahirina karo iyo xoogga VOCs durdur hawada ku raran ka warshadaha warshadaha daalan. By la weheliso gubaha ama qalabka kabashada dareeraha, kharashka bilowga ah iyo qalliinka labada nidaamka laga Nusqaaminayn Vocational oo dhan waa la si wayn hoos loogu dhigi karaa.
Vocational rotor fiirsashada laga sameeyey oo warqad imanba awlallada malabka sida substrate ah, taas oo zeolite sare silica (kelli shaandho) waxaa lagu cufay. rotor wuxuu u qaybsan yahay 3 qaybood sida habka, desorption iyo qaboojinta goobaha ay quwad dhismeedka sanduuqa battariga iyo iska caabin kulaylka hawada. rotor waxaa si joogto ah isku beddeli at xawaaraha wareeg si mug leh by motor ah ku wajahan.
Maamulaha ururiye Vocational:
Marka gaaska Vocational dhammayn raran maraa zone habka of rotor taas oo si joogto ah isku beddeli ah, zeolite ku guban in rotor ka nuuga VOCs iyo gaaska la Daahiriyey waa daalay daarmayaay'e ah; Vocational nuugo qayb ka mid ah rotor waxaa markaas wareejiyo aag desorption ah, halkaas oo VOCs nuugo la desorbed karaa qadarka yar ee heerkulka sare hawada desorption oo la isugu si heer sare fiirsashada (1 ilaa 10 jeer). Markaas, gaaska Vocational xoog sare waxaa loo wareejiyey hababka daaweynta post ku haboon sida incinerators ama nidaamka dib u soo kabashada, qayb ka mid ah desorbed of rotor waa dheeraad ah u nasiisay in zone qaboojinta, halkaas oo zone la qaboojiyey by gaaska qaboojinta. Qayb ka mid ah Vocational gaaska dhammayn raran ka Warshadda maraa zone qaboojinta iyo waxaa loo wareejiyey Iskubedelka kulaylka ama kululeeyaha loo kululayn jiray oo looga faa'iideysan sidii hawada desorption.